Kacaankii Hormarinta Burkiino Safo (1983-1987) | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Sifooyinka Ay Leeyihiin Dadka Guulaysta.
Cabdijabaar Sh. Axmed, May 15, 2017
Sheekh Dhandhaawi iyo Ardaygiisii
Cabdiqani Qorane Cismaan, September 5, 2019
Sankara waxuu dhashay sanadkii 1949 bishii December, waxuu ku dhashay magaalada Yoko ee dalka Burkino Faso, waxuu dugsi dhexe iyo dugsi sare ku dhameeyey magaalada Bobo-Dioulasso ee dalkaasi.
Markuu dhamaayey dugsi sare, waxuu ku biiray ciidamada milatariga, isagoo da’ ahaan jiray 17 sano balse waalidkiis waxay la jeclaayeen inuu noqdo wadaad kaniisadeed, isaguna waxuu majeertay ciidannimo, markuu kusoo biiray milatariga, waxaa laga dareemayey firfircooni saa’id ah isagoo waliba da’yar.
Sanadkii 1970, waxuu tababar milatari u aadey wadanka Madagakar, waxuuna kasoo laabtay 1973, xiligaas oo uu kasoo qalin jabiyey tababarkii Madagaskar. Waddanka burkino faso waxaa gumaystay Faransiis, waxuuna madax baaninada qaatay 1960, kadib labo sano oo ke meel gaar. Laga soo bilaabo sanadkii 1959 illaa 1966 waxaa waddanka madaxwayne ka ahaa Maurice Yaméogo, waxuu joojiyey xisbiyadii doorasha muddadii uu xilka hayey, sanadkii 1966dii waxaa waddanka ka billowday kacdoono iyo qulqulatooyin loogana soo hordeedo madaxwaynaha xilka haya.
Sanadkii 1970, waxuu tababar milatari u aadey wadanka Madagakar, waxuuna kasoo laabtay 1973, xiligaas oo uu kasoo qalin jabiyey tababarkii Madagaskar.
Waddanka burkino faso waxaa gumaystay Faransiis, waxuuna madax baaninada qaatay 1960, kadib labo sano oo ke meel gaar.
Laga soo bilaabo sanadkii 1959 illaa 1966 waxaa waddanka madaxwayne ka ahaa Maurice Yaméogo, waxuu joojiyey xisbiyadii doorasha muddadii uu xilka hayey, sanadkii 1966dii waxaa waddanka ka billowday kacdoono iyo qulqulatooyin loogana soo hordeedo madaxwaynaha xilka haya.
Kadib waxaa waddan dib u qabsadey Aboubakar Sangoulé Lamizana, isagoo afgambiyey madaxwaynihii hore, waxuuna xukumayey illaa 1980, xiligaas oo afgambi loogala wareegay taladii waddanka.
Waxaana talada waddanka qabtay Col. Saye Zerbo. Serbo muddo yar buu xukumayey, isagiina afgambi milatari kadib waa laga tuuray xukunkii.
Thomes Sankara waxuu wadanka Burkina faso afgambi milatari kula wareegay sanadkii 1983, isagoo xiligaas 33 jiray, waxaan fududeeyey afgambigaan oo ka danbeeyey saaxiibkiis Blaise Compaoré, oo markii danba sabab u noqday; dhimashadii Sankara.
Sankara markii gacan ku dhigay waddankii horay la aron jiray Upper Volta, waxaa ka badalay magacii, waxuuna u badalay Burkina Faso oo macnaheedu yahaya dhulkii dadka wanaagsanaa(the land of Upright man) amase toosnaa.
Waxuu masraxa siyaasadda lasoo koray fir-fircooni iyo maskax furnaan, waxuu xargaha u laabay gumaysigii sida dadban u joogay waddanka, macdantana kala baxayey, dadkii wadankuna gaajada u dhimanayeen.
Waxuu kiciyey bulshadii si ay wax u qabsadaan, waxuu aad u dheerri galiyey bulshadii iyo dhallinyaradii, waxuu falkiyey abaabulka wax beerashada, waxuu dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha, waxuu aad hoos ugu dhigay kharashka dowladdu ku bixiso waxyaabaha aan macnaha wayn lahay, sida baabuur raaxada, waxuu mushaarkiisa ka dhigay kaliya 450 doolar.
Muddo afar sano buu talada waddanka hayey, dadkii iyagoo macdanta ku fadhiyada gacmaha hoorsanayey, waxuu kasoo saaray dad isku kalsoon, iskoodna wax u qabsankara, waxuu sameeyey talaal ugu yaraan labo miyan iyo bar shaqsi baa laga talaalay xanuunada faafa.
Waqtiyadaas waxaa afrika ka jirtay abaar adag, si aan nabaad guur uga dhicin waddankaas, waxuu tallaalay toban kun oo geed. Waxuu diiday oo quursadey waxtarka reer Galbeedka oo hadda afriga ku haysa dhibaatooyin tiro beel ah.
Waxuu yiri “who he feeds you, controls you” qofkii ku quudiya wuu ku xadadayaa, Soomalidu waxay dhahdaa “Af wax cunay xishood”. Waddankiisa waxuu kasoo saaray waddan baraarugsan, waxuu ku baarujiyey inay iyagu dhar toshaan u gaar ah oo ay xirtaan xilliyada farxadda iyo dabaal dagga.
Waxuu diiday wasiirada ama madaxda waddanka oo lacag xad dhaaaf ah ku bixinayaya diyaaradaha qaybaha qaaliga ah (first class), waxuuna yiri “diyaaradda ama qayb hore fariiso ama qayb danbe fariiso mar walba isku mar baad ka kacaysaan dhulka, isku marna waad ku soo dagaysaan dhulka, marka lacagtaas haku khaasaarin first class”.
Muddo afar sano, waxuu indhaha ukala furay bulshadiisii, waxuu tusay awoodda wax wada qabsiga, awoodda waxbarashu leedahay, iyo ahmiyadda haweenku u leeyihiin bulsho walba, waxuu cirib tiray dhaqankii hoos marinayey haweenka.
Waddankaan waxaa gumaystay Faransiiska, saamayn mug leh buu ku hayey ka hor Sankara, muddadii Sankara na waxuu qorsheynayey siduu uga takha lusi lahaa ninkaan baarugsan, si uu dib dahabkiisii ugusii aruursado.
Sanadkiib1987, waxaa afgambi milatari lagula wareegay dalkii Burkiina Faso, waxaana shirqoolkaas lagu dilay Thomos Sankara iyo 12 sargaal oo hal goob wada joogay, waxaana ka danbeeyey qorshaan Faransiiska, waxaan watay Compoire, oo ahaa Sankaara saaxiibkiis aan walaalo waxba dhaamin, isku goobtana ku koray, Blaise Compaoré waxuu ku noolaan jiray guriga Thomes sankara, waxay ahaan jireen saaxiibbo boggooda aan lakala xigin.
Blaise Compaoré waxuu talada waddanka hayey illaa 2014.
Tags: Kacaankii Hormarinta Burkiino Safo (1983-1987)
Next post Xasuusasho Aan Koobnayn - Si feejignaantu kuugu suurto gasho raac waddooyinkaan
Previous post Qorshe Xumada Qoyska Soomaaliyeed iyo Saamaynta Dhimashada